SharePoint waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu qanisan nidaamka deegaanka ee Microsoft. Haddii aad xiiseyneyso, ama jawi ay u eg tahay inaad dejiso, markaa koorsadan degdegga ahi adiga ayey kugu habboon tahay.
Waan duuli doonnaa oo ogaan doonnaa, gudaha 5 talaabo deg deg ah,
kala duwanaanshaheeda kaladuwan iyo astaamahooda qaarkood;
hababka loo helo, iyadoo ku xiran noocyada ay khusayso;
hawlaha ugu muhiimsan;
isticmaalka caadiga ah ee suurtogalka ah.
Ujeedada ugu weyn ee koorsadan ayaa ah baro qof kasta oo ku cusub ama aan waligiis la xiriirin Sharepoint fursadaha ay u fidin karto shakhsiyaadka iyo ururada, iyadoon loo eegin cabirkooda.
Waxaan diyaar ku nahay qaybta su'aalaha ...
Ku Fahmaan SharePoint 5 Talaabooyin Deg Deg ah oo Fudud Janaayo 11th, 2021Tranquillus
horeErey-socodsiinta Adeegsiga Microsoft Word 2016 Qaybta 1aad
socdaIsu abaabul bartaada (oo leh Trello)